Ime ụlọ Greenhouse China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ime ụlọ Greenhouse - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ime ụlọ Greenhouse)
Ime njem na-adị nso
Insoles kpụ ọkụ n'ọnụ na-enye ọrụ dịpụrụ adịpụ-enweghị wires ma ọ bụ batrị ndị ọzọ - ma ọ dịkarịa ala awa 2,500 ma ọ bụ ihe dịka mmeri anọ dị arọ. Iji Njikere Mmiri Na-agba Mfe dị mfe-nanị gbanwee ọnọdụ okpomọkụ na-ejikwa akara igwefoto na-arụ ọrụ na ntanetị nke ịhọrọ: Ntọala okpomọkụ atọ, Oge ọrụ: elu okpomọkụ 50...
Atọ atọ dị n'ime ime obodo
A nabatara ọrụ ahaziri iche Anyị nwere ekele maka mmasị gị na ngwaahịa anyị. Biko nye anyi ndụmọdụ n'okpuru Ama. maka amaokwu anyị ma kpọtụrụ anyị ka ịchọta ihe ngwọta kacha mma gị. size, max okpomọkụ, voltaji, wattage, Ngwa Nkọwapụta ngwaahịa AJỤDỤ NDỊ NA-EME: E nwere ike ịkpụcha ihe ndị anyị ji kpụ ọkụ n'ọnụ...
Ngosipụta na-ekpuchi akwa ime ụlọ na UL Mee ka ahụmahụ ị na-ahụ Ị chọrọ ịcha na mmiri na-enweghị mmiri ọ bụla? Ị ga-anwale ihe mgbochi anyị na-ekpo ọkụ maka enyo. Wụnye mpe mpempe ọkụ anyị na azụ nke enyo, gbanye ọkụ eletrik na ị nwere ike ịnụ ụtọ ịsa ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ihe mgbochi kpo oku na- anọgide...
Ime ụlọ Greenhouse Ezigbo ụlọ ime ụlọ Greenhouse Gaa na Greenhouse Igwe Ngwurugwu Greenhouse Ime ụlọ ime ụlọ na agba Egwuregwu Na-ekpo ọkụ na Greenhouse na UL Ogwe ntụpọ oche oche Ihe ntanye ime ụlọ na Defogger